21/05/2011 : Rodobe : zaza roa tsy nahatsiaro tena (+vidéos)
Zaza amam-bolany roa no tsy nahatsiaro tena noho ny entona mahery vaika ampiasain’ny hery famoretana hanaparitahanan ny vahoaka. Taorian’ny fahatongavan’ny Pr. Zafy Albert teny Anosy dia niredona hiram-pivavahana ny vahoaka ary nametraka saina teo amin’ny fiaran’ity Filoham-pirenena teo aloha ity hafantarana ny fisiany eo amin’izany toerana izany. Tsy laitran’ny balan’ny fananarana anefa ny EMMOREG fa dia nadoboka tao ambanin’ny fiaran’ny Pr. Zafy mihitsy ny grenady maromaro voalohany. Tsy maintsy nentina niala ny toerana haingana arak’izany ny tenany mba hialana amin’ny mety ho tsy fahasalamana aterak’ity daroka lavareny ity.
Ankoatry ny vahoaka mpitolona dia maro ireo olon-tsotra tsy manam-po izany fihetsika feno habibiana ataon’ny mpomba ny FATE izany no mizaka ny vokany. Ireo zaza mena vava roa dia naterin’ny mpitolona nahafoy tena tao amin’ny HJRA avy hatrany. Nisy ihany koa ny ramatoa iray efa nahazo taona no tsy maintsy netina tao satria tsy nahatsiaro tena minitra vitsy noho ny fahaseporana. Ireo any anaty fiara fitateram-bahoaka moa dia efa tsy lazaina intsony fa dia tsy maintsy mijanona haingana satria na ny mpamily aza sepotra noho ilay entona mahery vaika. Asain’ny FATE mizaka ny herisetrany avokoa ankahitriny ny mpiara-belona rehetra ary efa ho isan’andro mihitsy izany fa tsy mba tsindraindray fotsiny.
Minitra vitsy mialoha an'io :
19/05/2011 : Rodoben'ny Malagasy : miha-mahery vaika isan'andro ny grenady asesika ny vahoaka (+vidéos)
18/05/2011 : Rodoben'ny Malagasy hoan'ny Tanindrazana : maherin'ny 50 ny grenady nirefotra teny Anosy (+vidéos)
Raha fintinina tsotsotra ny zava-nitranga teny Anosy dia tsy nahatohitra ny hamaroan'ny vahoaka ny hery famoretana ka tsy nanan-katokona afa-tsy grenady. 50 tany hoany ny "grenades lacrymogènes" nirefotra teny an-toerana. Tovolahy telo no nosamborin'ny ekiapan'ny Jly Ra-Bomba ary naratra avokoa izy ireo nandritry ny fisamborana. Izany hoe "resaka fotsiny no bobaka" hoy ny tanora fa tsy misy fahafahana izany eto Madagasikara.
Sary Rodobe teny Anosy
Efa tamin’ny 09 ora maraina no nanomboka tonga teny Anosy ny vahoaka vonona hanao ny rodobe. Efa teny an-toerana ihany koa ny hery famoretana ary nivezivezy teny amin’ny manodidina an’Anosy. Niandry tamim-pilaminana ny fahatongavan’ny mpitarika izy ireo ary tsy nanakorontana velively.
Tamin’ny 12 ora sy sasany tany ho any no nigadona teny an-toerana ireo mpitari-tolona. Isan’ny tazana teny Jean-Louis Rakotoamboa; Ihanta Randriamandranto, Ruffine Tsiranana, Prince Elakovelo, Zafilahy Stanislas, Guy Maxime Ralaiseheno, Pastera Edouard sy ireo mpitarika maro avy amin’ireo solotena isam-paritra tonga eto an-drenivohitra. Minitra vitsy taorian'izay no nigadona teny Anosy ny Pr. Zafy Albert. Teo dia nidina an-dalam-be avy hatrany ny Rodobe ary nihazo ny “ronds-point” manoloana ny Lapan’ny Antenimieran-doholona. Nahita izany ireo hery famoretana dia niantrana avy hatrany manoloana ny fivarotam-boninkazo teo aloha. Niala maina anefa izy ireo satria nihodina nihazo ny lalana mankany amin’ny Lapan’ny Fitsarana ny rodobe.
Teo anoloan’ny Lapan’ny Fitsarana no nifanatrika ny vahoaka sy ny EMMOREG ary teo no nandray fitenenana ny Pr. Zafy Albert. Nitondra fanazavana tamim’ny fanamafisam-peo ny tenany mikasika ny antom-pisian’ny rodobe androany. Teo ihany koa no nanambarany fa “hihazo am-pilaminana ny Radiom-pirenena ny vahoaka hitaky ny fazahoana maneho hevitra malalaka ao amin’izany hainoamanjerim-bahoaka izany”.
Minitra vitsy taorian’izany dia nirefotra ny baomba mandatsa-dranomaso nanaparitaka ireto vahoaka mitolona amin’ny fiverenan’ny ara-dalàna eto amin’ny firenena. Narahin’ny EMMOREG hatrany Antanimbarinandriana ny vahoaka ary tsy nitsahatra ny fitifirana grenady mandra-piparitak’izy ireo. Arahy ny nambaran'ny mpandrindra ny Rodobe dia maherin'ny 50 isa ireo grenady napoakan'ny hery famoretana tamin'ny vahoaka androany.
Rehefa afaka minitra vitsy anefa dia niverina nitangorona teo Anosy indray ny olona ary dia raikitra teo ny fisamborana. Tovolahy telo no naondran’ny hery famoretana ary naratra avokoa izy ireo tamin’ny fotoana nisamborana azy.
Araky ny filazan’ny renim-pianakaviana iray dia sendra nandalo nitazana izy ireo no noraofin’ny EMMOREG ny vadiny. Ity farany izay tsy salama fa hamonjy fodiana no nandalovany teny Anosy.